Warka - Suuqa budada kaalshiyamka kaalshiyam -ka oo aan biyo lahayn ayaa marar badan la kulmay koboc cajiib ah qaybaha ganacsiga ee ciyaartoy waaweyn
Suuqa budada kaalshiyamka kaarboon -biyo -mareenka ah ayaa marqaati u ah koritaan xoog leh. Shirkadda Western Chemical Corporation waxay dhammaystirtay iibinta Anadarko Petroleum Corporation oo dhan $ 55 bilyan
Calcium chloride waxaa caadiyan loo adeegsadaa soo saarista balaastikada, caagga iyo qalabka kale ee kuleylka kuleylka. Waxaa loo adeegsan karaa sidii wax lagu daro ama qayb ka mid ah qaababka kiimikada ee kala duwan. Waxaa lagu dari karaa antifreeze, naaftada, baatroolka, saliidda macmalka ah, rinjiga, varnish, polyurethane, saliidaha, dhejiyeyaasha, sunta cayayaanka iyo alaabo kale oo badan. In kasta oo badeecadani aysan u baahnayn heerkul sare si loogu daro ama looga saaro, waxay u baahan yihiin in lagu kaydiyo jawi aan lahayn qoyaan iyo heerkul aad u daran. Dhawaan, warshadaha dharka ayaa baahi weyn u qaba budada kaalshiyamka chloride. Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa sidii wakiil -cabbir iyo diyaarinta xalalka brine ee qalabka qaboojiyaha. Sanado badan, ha ahaadeen kuwa horumaray iyo kuwa soo korayaba, warshadaha dharka ayaa noqday mid ka mid ah warshadaha ugu rajada badan xagga qiimaha iyo tirada. Sida laga soo xigtay xogta Hay'adda Indian Equity Foundation (IBEF), suuqa dharka iyo dharka Hindiya waxaa lagu qiimeeyay $ 100 bilyan oo doolar sannadka 2019, iyada oo ay ka shaqeeyaan ku dhawaad ​​45 milyan oo shaqaale ah dalka oo dhan. Sidaa darteed, arrimahan ayaa kor u qaadi kara koritaanka suuqa budada kaalshiyamka kaalshiyam -biyoodka ah.
Hel nuqul muunad ah ee warbixintan suuqa@https: //www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1788
Marka la eego raadadka juqraafiyeed, gobolka Aasiya-Baasifigga ayaa sannado badan lahaa baahi aad u weyn oo ah budada koloriin-biyoodka. Tani waa sababta oo ah warshadaha kiimikada ayaa si joogto ah u korayay. Intaa waxaa dheer, Waqooyiga Ameerika waxay qaadanayaan qaddar aad u badan oo ah budada koloriin oo aan biyo lahayn. Kobaca degdegga ah ee qaybta dawooyinka ayaa kor u qaadi kara koritaanka suuqa budada koloriin -biyoodka ee gobolka mustaqbalka dhow.
Dhawaan, bishii Maajo 2019, Shirkadda Western Chemical Corporation, oo ah alaab -qeybiye kaalshiyam koloriin ah, ayaa Anadarko Petroleum ku iibsatay 55 bilyan oo doolar.
Budada kaalshiyamka kaalshiyamku waa mid ka mid ah diyaarinta kalsiyum -ka ee inta badan loo isticmaalo warshadaha kala duwan. Waxaa laga helaa budo badan oo caadi ah, sida cusbada Epsom, magnesium sulfate, iyo cusbada dhagaxa. Dhismahan budada ah wuxuu leeyahay adeegsiyo kala duwan waxaana loo adeegsan karaa codsiyo kala duwan. Sidoo kale, warshadaha kale ee terminal -ka sida warshadaha kiimikada, dawooyinka, dheeha, iwm ayaa sidoo kale leh heer korsasho oo sarreeya oo ah budada kaalshiyamka kaalshiyam -biyoodka ah. Daawada, budadan ayaa inta badan loo adeegsadaa bedelka elektrolytka iyo wakiilka xasaasiyadda. Sidaa darteed, arrimahan wanaagsan ayaa kicin kara koritaanka suuqa budada kaalshiyam koloriin oo aan biyo lahayn mustaqbalka dhow.
In kasta oo ay jirto baahi weyn oo loo qabo budada kaalshiyamka kaalshiyamka kaarboon, kaydinteedu waxay u baahan tahay shuruudo gaar ah maxaa yeelay waxay nuugi kartaa qoyaanka hawada waxayna u beddeli kartaa brine dareere ah. Sidaa darteed, weelal gaar ah ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo tayada badeecada inta lagu jiro kaydinta. Sidaa darteed, dhibtaani waxay xaddidi doontaa koritaanka suuqa budada kaalshiyamka kaalshiyamka oo aan biyo lahayn.